Uzofihlwa ngenyanga ezayo uMadisha osekuqinisekisiwe ukuthi nguyena owashona engozini yemoto ngoDisemba - Impempe
Uzofihlwa ngenyanga ezayo uMadisha osekuqinisekisiwe ukuthi nguyena owashona engozini yemoto ngoDisemba
January 30, 2021 Impempe.com
UMotjeka Madisha ozongcwatshwa ngoFebhuwari kodwa washona kuqala uDisemba
Uzofihla ngoFebhuwari 6 uMotjeka ´Ace” Madisha okugcine kuqinisekisiwe ukuthi ungomunye wabadlule emhlabeni ngoDisemba 12 nyakenye engozini yemoto.
Le ngozi yenzeka eGoli ngaseKempton Park lapho imoto osekuqinisekisiwe ukuthi ibihamba uMadisha (25) ishayise isigxobo yagqamuka amalangabi.
“UFebhuwari 6 ilona usuku oluqokiwe ukuthi abekwe ngalo uMadisha. Ngebhadi kunesibalo okumele sikalwe kwabazobe bekhona emngcwabeni walo mdlali oshone nyakenye.
“Uzofihlelwa eGa-Madisha Leolo eZebediela, eLimpop Provinve.”
Le ingxenye yesitatimende esikhishe iSundowns ngoMgqibelo iqinisekisa ngemuva kwezinsukue ezingu-50 lo mdlali weBafana Bafana adlula emhlabeni.
Kulesi sitatimende iSundowns igcine iqinisekisile ukuthi umdlali wayo ungomunye wabashone kule ngozi eyenzeke esikhathi esicela enyangeni nohhafu.
“Kuqaqamba enhliziyweni ukuthi siyiMamelodi Sundowns siyaqinisekisa ukuthi uMotjjeka “Ace” Madisha ushonele kule ngozi eyenzeke eKempton Park nyakenye,” kuqhuba isitatimende.
“Sekuphele izinsuku ezingu-50 uMadisha aba kule ngozi enyantisayo. Ngenxa yobucayi bengozi nomonakalo obuwenzeke emzimbeni kudingeke ukuthi icutshungulisiswe kahle le ngozi ngaphambi kokuthi kuqinisekiswa konke.
“Bekumqoka kakhulu ukuthi ilandelwe yonke imigudu ngaphambi kokuphumela obala ngoba izingozi ezinje zivamise ukudida.
“Le ngozi eyenzeke kuZuurfontein Road ngasekomkhulu leSundowns eChloorkop ayigcinanga ngokuthatha uMadisha kepha kushone kuyona nomngani wakhe akhule naye uThabang Martin Kakase,” kusho isitatimende.
Ngemuva kokuvela kwezindaba zokushona kukaMdisha umndeni wakhe uhlangane nodokotela abehlola izidumbu kodwa kuthathe isikhahti ukuthi kuvele ukuthi owayeshayela ilunga lomndeni wakwaMadisha,” kuqhuba sona.
Ngemuva kokushona kwalo mdlali umndeni wakhe uyihlabe kakhulu indlela amaphoyisa aluphathe ngayo udaba obekwenza bangazi noma baqhubeke kumbe bame ngamalungiselelo omngcwabo.
Previous Previous post: Uthi ukhethe iSundowns ngoba iyona ehamba phambili ebholeni lakuleli uDe Reuck
Next Next post: Ikuphindile lokho iPirates ishaya iChiefs kowoMkhaya